दिवंगत हिमाली श्रीस मगरको नाममा अक्षयकोष स्थापना – www.janabato.com
Latest TOP STORIES गाउँघर समाचार
दिवंगत हिमाली श्रीस मगरको नाममा अक्षयकोष स्थापना
२८ पुष २०७४, शुक्रबार १६:१८ January 12, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
जनबाटो संवाददाता । पौष २८– संगम युवा समूह सत्यवती गाउँपालिका–३, ठूलो लुम्पेक दाङ्सिङ्गाले दिवंगत आफ्नो महिला भलिवल स्पाइकर हिमाली श्रीस मगरको सम्झनामा स्मृति अक्षयकोष स्थापना गरेको छ ।
समूहले हरेक बर्ष आयोजना गर्ने भलिवल प्रतियोगितामा महिलातर्फका विभिन्न पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय समेत सार्वजनिक गरेको छ । यसवर्ष माघे सकरातीको अवसरमा आयोजना गरिएको भलिवल प्रतियोगितादेखि यो निर्णय कार्यान्वयन गरिने आयोजकले बताएको छ ।
दिवंगत हिमाली श्रीस मगर संगम युवा समूह महिला भलिवल टिमको तर्फबाट खेल्दै आएकी थिईन् । उनी टिमको राम्रो स्पाइकर थिइन् । पछिल्लो केही बर्ष संगम यूवा समूहको तर्फबाट शसक्त प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी उनको जण्डिजका कारण कार्तिक २३ गते अल्पआयुमै निधन भएको थियो । उनको निधनले समूहलाई स्तब्ध बनाएको थियो । अक्षयकोष सञ्चालनका लागि समूहले आर्थिक सहयोगका लागि आव्हान गरेको छ ।
← माघे सकराती मेलाको अवसरमा गुल्मीको रिडीमा फोटो प्रदर्शनी हुने
बुटवलस्थित कालिका र मानवज्ञान मावि मर्ज हुँदै, नेतृत्व कालिकाको हुने
९ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०६:५५ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on बुटवलस्थित कालिका र मानवज्ञान मावि मर्ज हुँदै, नेतृत्व कालिकाको हुने
६०–४० को आधारमा हुने भयो एमाले–माके एकता
४ बैशाख २०७५, मंगलवार ०४:४० जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on ६०–४० को आधारमा हुने भयो एमाले–माके एकता
बुटवलमा प्रथम सहिद लखन थापा मगरको स्मृति समारोह सम्पन्न (फोटो सहित)
३ फाल्गुन २०७४, बिहीबार ०२:५९ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on बुटवलमा प्रथम सहिद लखन थापा मगरको स्मृति समारोह सम्पन्न (फोटो सहित)